TRF amin'ny Radio - The Reward Foundation - Fitiavana, Firaisana ara-nofo sy Internet
Home TRF amin'ny Radio
Nasaina hiaraka i Mary Sharpe Sarah Brett tao amin'ny Radio 5 mivantana mba hiadian-kevitra momba ny fiakarana farany amin'ny isan'ny tanora mila fitsaboana ara-pananahana ao amin'ny NHS. Amin'ity dinika ity amin'ny 7 Oktobra 2019 dia fantatsika fa ny fangatahana latsaky ny 19 taona ho an'ny fitsaboana ara-pananahana dia nitombo avo telo heny tao anatin'ny roa taona monja. Tamin'ny vanim-potoana 2015 ka hatramin'ny 2017 dia nisy 1,400 NHS referral ho an'ny tanora amin'ny mpitsabo ara-nofo. Amin'ny vanim-potoana manaraka manomboka amin'ny 2017 ka hatramin'ny 2019, dia nitombo hatramin'ny 4,600 XNUMX teo ho eo. Henoy ny eritreritr'i Mary momba ny anjara asan'ny pôrnôgrafia amin'ny fitondrana io fanovana io.
PM dia ny vaovao momba ny sainam-pirenena ary ny programa misy ankehitriny momba ny Radio 4, nandefa tao UK, ary manerana izao tontolo izao. Tamin'ny Alatsinainy 1t Aprily 2019 Evan Davis nampiditra sehatra 6-minitra avy amin'ny mpanao gazety Chris Vallance amin'ny rafitry ny Age Verification UK mba hampihena ny fahazoan'ny ankizy sary vetaveta amin'ny Internet an-tserasera. Mary Sharpe, tale jeneralin'ny TRF, dia nilaza fa maninona no manan-danja io lalàna io, na dia tsy lavorary aza.
BBC Radio Scotland no tambajotran-tserananay. TRF dia niseho tao anaty fampisehoana maromaro ary afaka mijery foana ianao BBC Sounds.
Ny mpivarotra lamaody an-tserasera Boohoo.com dia manana ny iray amin'ireo doka voararan'ny Internet Standards Authority noho ny fampiasana ny teny filamatra “Mandefa nudes” hampiroborobo ny akanjo vita amin'ny hoditra. Mary Sharpe dia nanatevin-daharana an'i Jess McBeath sy mpaneho hevitra hafa ao amin'ny fampisehoana Kaye Adams ao amin'ny 17 Oktobra 2019 mijery ny fahendren'ny fitsarana avy amin'ny fomba fijerin'ny ankizy.
Inona avy ny vokatry ny fiompiana an-jaza? Mary Sharpe dia niseho tao amin'ny Good Morning Scotland ao amin'ny 3 Septambra 2019 miaraka amin'ny Rape Crisis Scotland. Vakio bebe kokoa momba ny sexting sy ny lalàna any Skotlandia Eto.
Tamin'ny fanambaràna ny daty nanombohan'ny "Verification Age" tany UK, Mary Sharpe dia nanatevin-daharana an-tariby nandritra ny ora maro niaraka tamin'i Laura Maxwell tamin'ny 18 April 2019. Ny manaraka 6-minitra manaraka dia manasongadina ny eritreriny any amin'ny faran'ny fandaharana.
Ny resaka nifanaovana tamin'ny tanora momba ny pôrnônika dia ny lohahevitry ny adihevitra natolotry ny Kaye Adams tamin'ny 20 martsa 2019. Nisongadina niaraka tamin'i Sarah i Mary Sharpe, iray amin'ireo reny avy amin'ny andian-dahatsoratra Channel 4 "Mums Make Porn", Andrea Chapman mpanolotsaina sady mafana fo mpanohana ny pôrnôgrafia Jerry Barnett.
Henoy i Mary Sharpe miresaka momba ny fandeferana sy ny pôrnôgrafia ao anaty sehatra fohy ao amin'ny Stephen Jardine asehoy amin'ny 15 Febroary 2019.
John Beattie dia niresaka adihevitra mafana momba ny fampiasana sary vetaveta amin'ny 20 November 2018. Ny vahiny dia Mary Sharpe, Anne Chilton avy amin'ny Relationships Scotland sy Emma Kenny.
Stephen Jardine nanadihady an'i Mary Sharpe, miaraka amin'ny mpampianatra sy reny sahiran-tsaina amin'ny fandaharam-potoana famaranana ny Radio Scotland any amin'ny 17 Jolay 2018.
I Mary Sharpe dia nanadihady an'i Ian McNally avy amin'ny Radio Napier tamin'ny milina fanontana 10-minitra momba ny Drugs Digital. Navoaka tamin'ny aterineto tamin'ny 27 Oktobra 2017.
Ny Radio Sputnik World Service ao Moskoa dia nanadinadina an'i Mary Sharpe nandritra ny minitra 11. Nandritra ny resadresaka nifanakalozan-kevitra momba ny fiakaran'ny fampijaliana zaza amam-behivavy dia hita tany Angletera sy Pays de Galles. Nalefa tamin'ny mpihaino manerana izao tontolo izao ny 9 Oktobra 2017.
Mary Sharpe nanadinadin'i Stig Abell tamin'ity toerana 3 ity tao amin'ny LBC Radio any London, 21 August 2016. Nandeha tany Grande Bretagne izany.
Mary Sharpe miresaka momba ny fampiendrehana ny fanentanana ny pôrnônina amin'ny resadresaka 18-minitra miaraka amin'i Stephen Nolan ao amin'ny Radio Ulster any Northern Ireland.
Tsindrio Eto raha te handre bebe kokoa ny resaka mifandraika amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra Stephen Nolan ianao.